December 6, 2017 latestnewsLeaveaComment on भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छैनौं, हामी सहकार्यमा छौं
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको टोखास्थित आफ्नै निवासमा पुग्दा उनी उत्साही मुद्रामा भेटिए । बिहानैदेखि घरदैलोमा हिँडेका उनी भर्खरै फर्केका रहेछन् ।
‘कम्तिमा पनि पाँच हजार भोटले जितिन्छ,’ निवासको प्रांगणमा भेला भएका कार्यकर्ताहरु चुनावको आँकलन गर्दै थिए । पोखरेल काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी यसअघि यही क्षेत्रबाट एकपटक विजयी र दुईपटक पराजित बनेका थिए । तर, यसपालि जित हात पार्ने रणनीतिमा छन् ।
एमाले महासचिव पोखरेल ओखलढुंगामा जन्मेका हुन् । ०२५ सालदेखि राजनीतिमा लागेका पोखरेलले स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । १४ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका पोखरेलसँग पटक-पटक गरी तीन वर्ष जेल बसेको अनुभव छ । उनी दुईपटक मन्त्री बनिसकेका छन् भने हाल एमाले महासचविको रुपमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका छन् ।
एमाले महासचिव पोखरेलसँग हामीले उनको चुनावी क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक अवस्था र वाम गठबन्धनको भविश्यका बारेमा कुराकानी गर्‍यौं । अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् कि अरु कोही भन्ने प्रश्नमा महासचिव पोखरेलले भने-‘औपचारिक घोषणा गरेका छैनौं, हामी सहकार्यमा छौं । संवाद, छलफल गरेर साझा निश्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा चुनावको समग्र परिणामबारे एमालेको आँकलन के छ ?
आज मंसिरको १५ गते भयो । २१ गते चुनाव छ । मंसिरको अन्तिम हप्तामा वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार बन्छ ।
बहुमतको सरकार बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
ढुक्क किन नहुने ?
मंसिर १० गते भएका ३७ वटा क्षेत्रमा वामपन्थी गठवन्धनले कति क्षेत्रमा जित्ला ?
हाम्रो अञ्दाज घटीमा ३० नभए ३२ हो । अर्को चरणका १२८ वटामा एक सयदेखि एक सय ५ वटामा जित्छौं ।
मतगणना नगरुन्जेल दाबी त जति गर्दा पनि भयो नि ?
दाबी मात्र होइन, भोलि यथार्थमा प्रकट हुने कुरा हो । काँग्रेसले कहाँ जित्छ ? ताप्लेजुङ जित्छ ? पाँचथर जित्छ ? इलाम जित्छ ? तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु कहाँ जित्छ ? यहीँ भन्नुस्, दोलखा जित्छ ? रामेछाप जित्छ ? सिन्धुपाल्चोक जित्छ ? अनि कहाँ जित्छ ?
वामपन्थी गठवन्धनको बहुमत आयो भने प्रधानमन्त्री को हुने ?
हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयमा पहिले छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा चुनावमा गरेर जानुपर्छ भन्ने एकथरी तर्क थियो । अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज जबरजस्त रुपमा उठेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत प्रस्तुतिहरु हुँदा सबैजसो समूहबाट यो कुरा आएको हो ।
अर्को तर्क चाहिँ भोलि अरु दलसँग तालमेल गरेर जाँदा यसले अलिकति असमझदारी हुन्छ कि भन्ने थियो । गरौं कि नगरौं भन्ने बहस हुँदा ठिकै छ नगरौं भन्ने भयो ।
अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी यस्तो सेन्सेटिभ ठाउँमा छौं, हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने छ । त्यसकारण सुरुमै हामीले (भावी प्रधानमन्त्री) तोक्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव त देला, तर सँगसँगै अन्यखाले कुरा हुन सक्छन् । (प्रधानमन्त्री) हुने त जुन पार्टीको वर्चश्व छ, जुन नेताले लिड गरिररहेको छ, पक्कै पनि उही नै हो । तर, औपचारिक घोषणा गरेका छैनौं । हामी सहकार्यमा छौं । संवाद, छलफल गरेर साझा निस्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ ।
यस विषयमा माओवादीसित मोटामोटी समझदारी त भएको होला नि ? केपी ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने गरी आन्तरिक सहमति भएको भनेर आएको कुरा के हो ?
अहिले राजनीतिमा भागबण्डाबाहेक अरु सोचिँदैन । अभ्यास पनि त्यस्तै हुँदै आयो । सरकारमा पनि भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा । त्यसैले हामीबीच पनि भागबण्डा भयो होला भन्ने सोचिएको हुन सक्छ । त्यस्तो केही भएको छैन ।
भागबण्डा त गर्नै पर्ला नि दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने भनेपछि ?
भोलि भागबण्डा त होला । तर, सुरुमै पदको भाग मिलाएर एकताको कुरा गरेका होइनौं । म त सुरुदेखि सम्वादमा छु । त्यो हिसाबले हामी गएकै छैनौं । एकतावद्ध भएर जाने भनेर माइन्ड ओपन भइसकेपछि पद ठूलो समस्या हुँदैन । चुनावको चटारो सकिएपछि यसमा केन्दि्रत हुन्छौं ।
Tagged नेकपा एमाले